Egweri biini on iPhone ka ịzọpụta gị site data ọnwụ
Bụ n'ebe a egweri biini on iPhone ka ịzọpụta gị site data ọnwụ
E nwere mkpa nke egweri biini nke ọ bụla elu ọgwụgwụ handset na a ugbu a na-eji n'ụwa nile. Ọ ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na-emekwa ka n'aka na faịlụ na-accidently ehichapụ na-weghachiri eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọtụtụ ndị ngwa na-nyere na-ọrụ na nke a bụ ndị na-n'efu na maka otu ihe ahụ ha na-gosiri elu dị ka onye ọ bụla hụrụ na-free na nke a.
Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ngwa ntuziaka na-ebudatara na ojiji doo anya n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-adịghị mere mgbe ahụ ngwa nwere ike ọ gaghị na-arụ ọrụ nke ọma na onye ọrụ na onye chọrọ pụta bụ ihe na- -apụghị zutere na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị a niile ahịhịa njikwa ngwa na-mepụtara eburu n'uche kasị elu mmepe ụkpụrụ na n'agbanyeghị na free ndị a ngwa na-emelite ugboro ugboro na mkpa nke hour bụ ime ka n'aka na ngwa na-arụnyere na nke kacha mma n'ụzọ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si ojiji nakwa na bụ adọ na enweghị ihe ọ bụla nke.
Bụ n'ebe ọ bụla egweri biini ngwa n'ihi na iPhone / iPad?
Mwute ikwu na ọ bụ ajụjụ na azịza nke bụ nnukwu NO na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ihe ndị na-otu ugboro ehichapụ si iPhone na-mgbe gbakee. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwa na metụtara data na bụ ugbu na iPhone ebe nchekwa na-abụghị nanị nọ nnọọ nlezianya ma precautionary jikoro kwesịkwara iwere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. The ozi ọma bụ na Apple Inc. nwere enweghị ukara ụzọ iji weghachite furu efu data ma e adị ụfọdụ nontraditional na unofficial ụzọ mee ka n'aka na data e weghachiri eweghachi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi na-amụ iji jide n'aka na ihe kasị mma na nke kasị egwu software usoro ihe omume nke data nlaghachie ebudatara na arụnyere ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na usoro ndị enyere na-emejuputa atumatu ke otu iji.
Olee otú iji weghachi-ehichapụ faịlụ na iPhone?
Ka e kwuru tupu nakwa na ọ dịghị ukara ụzọ nke na-eme n'aka na data na-Ewepụtara si iPhone Otú ọ dị, e nwere unofficial ụzọ mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri enweghị ihe ọ bụla nsogbu na Wondershare Dr. Fone bụ otu ndị dị otú ahụ ngwọta nke na-eme n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu na-arụzi ụgbọala na-abụghị nanị etinyere ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nloghachi. The n'ozuzu na-arụzi ụgbọala na e deployed n'ime Wondershare Dr. Fone mere ka n'aka na ụzọ kasị mma e agbakwunyere n'ime usoro ga-eme ka n'aka na ojiji bụghị nanị dị mfe ma na novice ọrụ nwere ike na-aga n'ihi na nke a enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ irè na oru oma ojiji nke usoro ihe omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na data si iPhone na-natara enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na omume na-abụghị nanị na irè ma ọ na-enyekwa 100% ekwe nkwa na faịlụ furu efu ga-hụrụ enweghị ihe ọ bụla nsogbu ma ọ bụrụ na ha adịghị e overwritten na ụdị ụfọdụ nke ndị ọzọ omume na ebudatara maka ihe ọ bụla nzube. Zuru ike na ọ na-obi ike na ọ bụrụ na iPhone n'okpuru ajụjụ osobo chọrọ mgbe ahụ onye ọrụ ga-100% mgbake na dị nnọọ ole na ole clicks.
Olee otú iji weghachi-ehichapụ faịlụ na iPhone na enyemaka nke Wondershare Dr. Fone?
Usoro na e metụtara na Wondershare Dr. Fone bụ ihe kasị mma na onye na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu terminologies na-eji na dị nnọọ ole na ole clicks iji jide n'aka na na ala nke nkà ndị na-enwe. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na usoro na e kwuru n'okpuru na-soro dị ka ọ bụ zere ihe ọ bụla nke na nsogbu:
1. Site URL http://www.wondershare.com/drfone-iphone-data-recovery.html onye ọrụ kwesịrị ka ibudata na-agba ọsọ ahụ ngwa na-ebute usoro:
2. The ọrụ ga-eme ka ahụ n'aka na mmalite Doppler button na-enwe mere na nke furu efu faịlụ na-Ewepụtara jidesie ekwentị na nke a kwa na-egosi otú mfe ojiji nke Wondershare Dr. Fone bụ mgbe ọ na-abịa novice ọrụ:
3. Onye ọrụ ga-eme ka ahụ n'aka na faịlụ ahụ ike na ndị ọzọ na ịkọ ihe ọmụma banyere faịlụ natara a hụrụ juputara:
4. The onye ọrụ nwere ike eme ka ahụ n'aka na data a na ma natara ka ngwaọrụ ma ọ bụ na kọmputa dị ka ọ na a na e weere na-kwesịrị ekwesị:
Atụmatụ na iji zere data ọnwụ na iPhone
Na-esonụ bụ ụfọdụ Atụmatụ na a ga-atụle site onye ọrụ na nke a iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-enwe enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
1. The data ndabere bụ ihe kasị mkpa akụkụ nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe data nchebe ọrụ.
2. The ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite ntuziaka dị otú ahụ n'ụzọ nke na-eme n'aka na data ọnwụ na iPhone dị ize ndụ ma ọ na-apụghị imegharị ya. Ozugbo onye ọrụ mmata bụ kere data ga-aghọ enem.
3. Iji zere data ọnwụ ọ na-gwara ka ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma mgbake software omume na-eji maka mgbake ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mfe.
Olee otú ịmanye efu na ahịhịa na gị mac
Olee otú undelete egweri biini na Windows ma ọ bụ Mkpofu na Mac
Ehichapụ Photos na Notes!
Full Solutions ka The iPhone akụghịna / Reboot mere site iPhone Crash Text Mes
Otú nyefee iPhone Videos na mpụga ike mbanye
Otú nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Nexus 4
> Resource> iPhone> Enwere egweri biini on iPhone ka ịzọpụta gị site data ọnwụ